China 6061-T651 Aluminium mpanamboatra takelaka sy mpamatsy | Ruiyi
6061-T6 dia iray amin'ireo firaka vita amin'ny aliminioma 6000 andiany ampiasaina matetika. 6000 andiana takelaka vita amin'ny aliminioma omena dia misy andiana 6061 sy 6082. Ny tena manokana manokana, ny takelaka aliminioma 6061 dia vokatra misolo tena an'ity andiany ity.
6061-T6 dia iray amin'ireo firaka vita amin'ny aliminioma 6000 andiany ampiasaina matetika. 6000 andiana takelaka vita amin'ny aliminioma omena dia misy andiana 6061 sy 6082. Ny tena manokana manokana, ny takelaka aliminioma 6061 dia vokatra misolo tena an'ity andiany ity. Ny mpiorina lehibe indrindra amin'ity takela-by aluminium ity dia misy singa magnesium sy silicium. Izy io dia manana ny fiasa amin'ny andiany 4000 sy 5000.
6000 Aluminium famaritana takelaka
♦ Alloy: 6061 6063 6082 6A02 sns.
♦ matevina: 0.2-150mm
♦ mari-pana: 0-H112
♦ Hatevina (mm): 0.6-5.0mm
♦ Sakany (mm): 100-1800mm
♦ Fanamarihana: ISO9001, MSDS, SGS
Takelaka aliminioma 6061-T651 - (ASTM B209, QQ-A-250/11) Manolotra fitambaran'ny tanjaka mihombo, fanoherana ny harafesina ary ny fahaizan'ny machinability ka mahatonga azy io ho sokajy aliminioma be mpampiasa indrindra. 6061 Aluminium Sheet azo tsaboina amin'ny hafanana, manohitra ny famakiana noho ny fihenjanana, mora lasina sy milina, saingy voafetra amin'ny famolavolana. 6061 Aluminium Sheet dia mety amin'ny famolavolana rafitra, takelaka fototra, gussetts, môtô & faritra misy fiara, sns Mill Finish - Not Polished
Non-magnetika, Brinell = 95, Tensile = 45,000, vokatra = 40,000 (+/-)
Haben'ny stock: 1ft x 1ft, 1ft x 2ft, 1ft x 4ft, 2ft x 2ft, 2ft x 4ft, 4ft x 4ft, 4ft x 8ft, 4ft x 10ft na Tapaho ny habeny na ny endrika manokana.
Endri-javatra ny 6000 Series Aluminium Sheet
♦ Izy io dia karazana ravina vita amin'ny aliminioma izay azo foronina amin'ny fitsaboana mangatsiaka. Miaraka amin'izany dia azo ampiasaina amin'ny toe-javatra misy fangatahana be amin'ny fanoherana ny harafesina sy ny fitrandrahana oksidana.
♦ Vokatry ny fisiany tsara sy ny mpampitohy azy miaraka amina endri-javatra faran'izay tsara, mora mifono izy io ary manana fikirakirana tsara.
♦ Mety amin'ny fanodinana bebe kokoa ny rindrina mitafy sy ny rindrina ambainy
Fampiharana Sheet Aluminium 6000 Series
♦ Ity takelaka vita amin'ny aliminioma ity dia azo ampiasaina amin'ny fanodinana ireo faritra misy ny fiaramanidina, ny ampahany amin'ny fakantsary, ny mpiray tsikombakomba, ny ampahany amin'ny sambo, ny fitaovana, ny kojakoja elektronika sy ny tonon-taolana, ny valves sy ny valizy valizy, sns.
Izahay dia manome koa takelaka aluminium, coil slit aluminium, takelaka fanitsakitsahana aluminium 5 bar, strip aluminium, coil aluminium anodizing, plate aluminium tread aluminium, coil aluminium ary maro hafa. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny vokatrao, azafady mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny nomeraon-telefaona na mailaka omena ao amin'ny tranonkalantsika.
Amin'ny maha mpanamboatra sy mpamatsy ravina aluminium 6061 miorina an'i Shina, dia mamokatra coil aluminium mihosona ihany koa izahay, takelaka aluminium, coil aluminium slit, strip aluminium, ravina aluminium anodizing, sheet aluminium misy ambongadiny, sns. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, azafady tohizo ny fizahana ny tranonkalantsika na aza misalasala mifandray aminay mivantana
Teo aloha: Takelaka diamondra alimina 3003
Manaraka: Takelaka vita amin'ny takela-by aluminium